ကွန်ယက် ၁၀ သည်ပိုမိုကြွယ်ဝသောပါဝင်မှုအတွက် AWS မီဒီယာဝန်ဆောင်မှုများကိုရွေးချယ်သည် NAB သတင်းများ | 10 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » ကွန်ယက် 10 သည်ပိုမိုကြွယ်ဝသောပါဝင်မှုအတွက် AWS မီဒီယာဝန်ဆောင်မှုများကိုရွေးချယ်သည်
AWS မီဒီယာဝန်ဆောင်မှုများသည်ကွန်ယက် 10 ကိုပိုမိုမြန်ဆန်ပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသော streaming video စွမ်းရည်များဖြင့်ထောက်ပံ့ပေးသည်
ဆစ်ဒနီ - အင်္ဂါနေ့ 19 နိုဝင်ဘာ၊ 2019 - အမေဇုံက Web Services က, Inc (AWS), တစ်ဦး Amazon.com သြစတြေးလျ၏အကြီးဆုံးရုပ်မြင်သံကြားကွန်ယက်တစ်ခုဖြစ်သည့် Network 10 သည်တောင်အာဖရိကရှိဝေးလံခေါင်ဖျားသောထုတ်လုပ်မှုအတွက်ဗီဒီယိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဖွဲ့စည်းပုံကိုထောက်ပံ့ရန် AWS Media Services ကိုရွေးချယ်ခဲ့သည်ဟုကုမ္ပဏီကယနေ့ကြေငြာခဲ့သည်။ ငါအနုပညာရှင်တစ်ယောက်ပါ။ ငါ့ကိုဒီမှာထားပါနှင့်တိုက်ရိုက်လွှင့်ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့် Network 10 အစီအစဉ်များအတွက် streaming များဖြန့်ဝေမှုကိုမြှင့်တင်ရန် အဆိုပါဘွဲ့, Australian Survivorနှင့် MasterChef သြစတြေးလျ.
Network 10 သည်Australiaစတြေးလျရှိပထမဆုံးသောကုမ္ပဏီများအနက်တစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ AWS Elemental MediaConnect၊ cloud video transfer service ကို အသုံးပြု၍ တိုက်ရိုက်ဗီဒီယိုအကြောင်းအရာများကိုလုံခြုံစိတ်ချရသောပေးပို့နိုင်သည်။ အဆိုပါနည်းပညာသည်ကွန်ယက် 10 အားတောင်အာဖရိကရှိ Kruger အမျိုးသားဥယျာဉ်မှ၎င်း၏ဆစ်ဒနီအခြေစိုက်ထုတ်လုပ်ရေးစတူဒီယိုသို့ဗီဒီယိုသယ်ယူပို့ဆောင်ပေးခဲ့သည် ငါအနုပညာရှင်တစ်ယောက်ပါ။ ငါ့ကိုဒီမှာထားပါ 2019 ရာသီအတွင်းနှင့်နောက်လာမည့်သတ္တမရာသီ၌ထပ်မံအသုံးပြုလိမ့်မည်။
Aspera ၏အမြန်နှုန်းလွှဲပြောင်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု AWS Elemental MediaConnect နှင့် AWS Advanced APN Technology Partner ပေါင်းစပ်အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ကွန်ယက် 10 သည်ထုတ်လုပ်မှုအလှည့်ကျကိုတစ်ညမှ ၂ နာရီအောက်သာလျှော့ချနိုင်ပြီးအချို့ကိစ္စများတွင်မိနစ်အနည်းငယ်မျှသာဖြစ်သည်။
ဤပူးပေါင်းမှုသည် AWS Elemental MediaLive နှင့် AWS Elemental MediaConvert အပါအ ၀ င် Network 10 မှအသုံးပြုထားသောတည်ဆဲ AWS မီဒီယာဝန်ဆောင်မှုများကိုဖြည့်စွက်သည်။ AWS Elemental MediaLive သည် Network 10 ကိုထုတ်လွှင့်သည့်ရုပ်မြင်သံကြားမှစမတ်ဖုန်းများနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည့်တီဗီများကဲ့သို့သောအင်တာနက်ဆက်သွယ်မှုကိရိယာများသို့မည်သည့်စက်ပစ္စည်းမဆိုတိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုရန်ဗီဒီယိုများကို encode ပြုလုပ်သည့် streaming tool တစ်ခုဖြင့်ထောက်ပံ့ပေးသည်။ AWS Elemental MediaConvert ဖြင့်ကွန်ယက် 10 သည်ဖြန့်ဝေခြင်းသို့မဟုတ်သိမ်းဆည်းခြင်းအတွက်လိုအပ်သည့်အကြောင်းအရာများကိုပြင်ဆင်ရန်ဗွီဒီယိုဖိုင်များနှင့်ဗီဒီယိုဖိုင်များကိုလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
10 မှကွန်ယက် 2015 သည် AWS နှင့်အလုပ်လုပ်ခဲ့ပြီး Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), Amazon Relational Database Service (RDS), Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), Amazon Elasticsearch Service, Amazon Virtual Private အပါအ ၀ င် AWS ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုသည်။ ဝယ်လိုအားနှင့် Archive ရိုက်ကူးအပေါ် Cloud (VPC) နှင့် Amazon ElastiCache သိုလှောင်ခြင်းနှင့်လုပ်ဆောင်ရန်။
ကွန်ယက် 10 မှသတင်းအချက်အလက်နှင့်နည်းပညာအရာရှိချုပ် Jason Tuendemann က“ ကွန်ယက် 10 သည်အရည်အသွေးမြင့်အကြောင်းအရာများကိုသြစတြေးလျပြည်သူလူထုထံ 50 နှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင်ပို့ပေးနေပြီးကျွန်ုပ်တို့အတွက်တီထွင်ဆန်းသစ်ရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ်းလှမ်းမှုများကိုတိုးတက်စေရန်ကိရိယာများကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ရှာဖွေလျက်ရှိသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြည့်ရှုသူများ။ AWS နှင့်အလုပ်လုပ်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤဖြစ်စဉ်ကိုအရှိန်မြှင့်တင်နိုင်ပြီးထုတ်လုပ်မှုနှင့်ကြော်ငြာသူများအတွက်ပိုမိုသောအကြောင်းအရာများနှင့် ပို၍ အရေးကြီးသည်မှာပိုမိုပါဝင်သည်။ သြစတြေးလျစျေးကွက်တွင် AWS Elemental MediaConnect ကိုပထမဆုံးသုံးစွဲသူများနှင့် AWS ကိရိယာများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်အတူတီထွင်ဆန်းသစ်မှုကိုဆက်လက်လုပ်ကိုင်ရန်စိတ်လှုပ်ရှားမိသည်။ ”
သြစတြေးလျနှင့်နယူးဇီလန်ရှိကုန်သွယ်ရေးဒါရိုက်တာ Adam Beavis က“ သြစတြေးလျအသံလွှင့်လုပ်ငန်းဟာဒီဂျစ်တယ်နည်းပညာကိုအသုံးပြုပြီးမယုံနိုင်လောက်အောင်ပြောင်းလဲမှုကိုခံနေရသည်။ ကွန်ယက် 10 ကိုအရည်အသွေးနိမ့်သော Live Video များကိုအရည်အသွေးနိမ့်ကျစွာဖြင့်ပို့ဆောင်ခြင်းဖြင့်တရားစွဲဆိုခြင်းခံရသည်။ ၎င်းသည် AWS Elemental MediaConnect အားလက်တွေ့ကျကျလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ AWS သည်ဆန်းသစ်တီထွင်မှု၏ရှေ့တန်းမှဆက်လက်ရှိနေရန်သေချာစေရန် Network 10 နှင့်ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ရန်စိတ်လှုပ်ရှားနေသည်။
ဘယ်မှညာသို့: သြစတြေးလျနှင့်နယူးဇီလန်ရှိ AWS ၏ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဒါရိုက်တာ Adam Beavis နှင့်ကွန်ယက် 10 မှသတင်းအချက်အလက်နှင့်နည်းပညာအရာရှိချုပ် Jason Tuendemann
13 နှစ်များတွင် Amazon Web Services သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အပြည့်စုံဆုံးနှင့်အကျယ်ပြန့်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုလာသည့် cloud platform ဖြစ်သည်။ စက်ပစ္စည်းလေ့လာမှုနှင့်အတုထောက်လှမ်းရေး (AI)၊ အင်တာနက်အရာ (IoT)၊ မိုဘိုင်း၊ လုံခြုံရေး၊ မျိုးစပ်၊ virtual နှင့်တိုးပွားလာသည့်အဖြစ်မှန်များအတွက် AWS သည် 165 မှအပြည့်အဝပါ ၀ င်သော ၀ န်ဆောင်မှုများကိုပေးသည်။ 69 ပထ ၀ ီဝင်ဒေသများရှိ 22 ရရှိနိုင်သည့်ဇုန်များ (AZs) မှမီဒီယာနှင့်လျှောက်လွှာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ဖြန့်ကျက်မှုနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှု၊ 13 တွင်နောက်ထပ်ရရှိနိုင်သည့်ဇုန်များနှင့်အင်ဒိုနီးရှား၊ အီတလီ၊ တောင်အာဖရိကနှင့်စပိန်ရှိ AWS ဒေသ ၄ ခုအတွက်ကြေငြာခဲ့သည်။ အမြန်ဆုံးကြီးထွားလာသောကုမ္ပဏီများ၊ အကြီးဆုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်ထိပ်တန်းအစိုးရအေဂျင်စီများအပါအ ၀ င်သန်းပေါင်းများစွာသောဖောက်သည်များက AWS ကိုသူတို့၏အခြေခံအဆောက်အအုံများကိုအားဖြည့်ပေးရန်၊ AWS အကြောင်းပိုမိုလေ့လာရန်၊ aws.amazon.com.
အမေဇုံ AWS အမေဇုံက Web Services က AWS AWS ဒြပ်စင် AWS ဒြပ်စင် MediaConnect AWS မီဒီယာဝန်ဆောင်မှုများ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ဘော့ကုဒ်မြှပ်သွင်းကိရိယာ ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor isovideo, viarte, HDR, ဆူညံသံလျှော့ချရေး, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC ကို, 2015, ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး, စွဲငြိဖွယ်ရာ, UHD / 4K / HD ကို H264 / H265, ဝါဆော Network မှ 10 SoftAtHome, MStar, CES2017 လှံ & Arrows ရုပ်မြင်သံကြားကွန်ယက်ကို တီဗီနည်းပညာ TVU ကွန်ယက် က Ultra HD ဖိုရမ် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် virtual reality 2019-11-18
ယခင်: Encore VFX သည်“ Jay နှင့် Silent Bob Reboot” ပရိသတ်များအားကျောက်ခဲဖြင့်ပေါက်သည့်ကာလသို့ခေါ်ဆောင်သွားသည်